VaChinotimba Voyambira VaMakoni Kana Vakakwikwidza VaMugabe Musarudzo
Kukadzi 06, 2008
Gurukota rezve kumaruva, uye vari munyori munyaya dzemitemo muZanu-PF, VaEmmerson Mnangagwa, vanoti Doctor Simba Makoni vakazvidzinga vega mubato nekuti vari kuda kukukwidza mutungamiri webato iri, VaRobert Mugabe, musarudzo dzemuna Kurume.
Ukuwo mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe National War Veterans Association, VaJoseph Chinotimba, vanoti VaMakoni mutengesi uye vachaona zvekuita naVaMakoni kuzosvika pavachaendesa mapepa ekukwikwidza. Vatizve Zanu-PF ine nhoroondo yekuranga vatengesi.
Vakuru muZanu-PF vanoti mubato umu hamuna kumira zvakanaka, sezvo mave kutsvagwa kuti ndivanani vari kushanda naVaMakoni.
National Director weNCA, VaEarnest Mudzengi, vaudza mutori wenhau Blessing Zulu weStudio 7 kuti kutyisidzira VaMakoni mucherechedzo wekuti Zanu-PF haina hany'a nehutongo hwegutsaruzhinji.
Zvichakadaro, MDC inotungamirwa naVaArthur Mutambara inotiwo iri kufara kuti VaMakoni vari kuda kukukwidza chigaro chemutungamiri wenyika. VaMakoni vakakwanisa kunyoresa ne nominations court, vachakwikwidzana naVaMugabe, VaMutambara pamwe naVaTsvangirai.
Patience Rusere weStudio 7 aita hurukuro nemutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa naVaMutambara, VaAbenico Bhebhe, avo vati vose vanokwikwidza VaMugabe vanovatambira nemaoko maviri.
Nekowo mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, Muzvare Thabitha Khumalo, vaudza Patience Rusere weStudio7 kuti bato ravo harivimbi naVaMakoni kuti vari kupikisa VaMugabe muchokwadi.